Lakrimozena, tora-bato teny Vontovorona: zandary 4 sy olon-tsotra 3 naratra | NewsMada
Lakrimozena, tora-bato teny Vontovorona: zandary 4 sy olon-tsotra 3 naratra
Andro vitsy taorian’ny mpianatra Ankatso, nanatanteraka fitokonana koa ny mpianatra etsy amin’ny Polyteknika Vontovorona, omaly. Mafy ny fifandonana teo amin’ny mpitandro filaminana sy ireo mpianatra ka nisy ny naratra…
Raikitra indray ny savorovoro nataon’ny mpianatry ny Polyteknika etsy Vontovorona, omaly. Mbola tsy naharay ny vatsim-pianarany nandritra ny efa-bolana ireo mpianatra ka nanao ny fitokonana. Nivoaka ny faritry ny oniversite ary nametraka sakana teny amin’ny arabe miditra ny faritry ny oniveriste izy ireo. Noho ny kotaba sy ny fanakorotanana nataon’ireo mpianatra ireo, nidina teny an-toerana nampandry fahalemana ny mpitandro filaminana. Vao mainka nahatezitra ireo andiana mpianatra nanao fitakiana ireo ny nahita ny fiaran’ny zandary niatrana nanolona azy ireo ka raikitra ny tora-bato. Tetsy ankilany, voatery namaly tamin’ny fanapoahana baomba lakrimozenina ny zandary hanaparitahana fihetsiketsehan’ny mpianatra. Vokany, zandary miisa roa sy olon-tsotra telo no naratra noho ny fifandonana nahery vaika teny an-toerana. Marihina fa olon-tsotra sendra nandalo ny iray tamin’ireo naratra ireo ary zazakely vao sivy volana monja ny iray.
Mitaky vatsim-pianarana efa-bolana…
Iray volana sy ny vola fampitaovana ihany no nambaran’ny tompon’andraikitra fa hefaina raha efa-bolana no nianatra ny mpianatra. Amin’ity herinandro ity no hanisa ny mpianatra tena mpisitraka ny vatsim-pianarana ny mpiandraikitra eny an-toerana. Mangataka ny hampiakarana ny sora-bola izy ireo satria tsy mifanaraka amin’ny vidim-piainana intsony izany. Manampy trotraka ny olana efa misy koa ny fiakaran’ny hofan’ny trano nefa tsy misy mihitsy ny fanamboarana rehefa mangataka izany ireo mpianatra. Miandry ny fihaonana amin’ny tompon’andraikitra izy ireo momba ny ho tohin’ny hetsika na tsia, anio.
Tsiferana Randriatiana sy Vonjy